Dil ka dhacay degaan ka tirsan Galgaduud & xiisad ka taagan - Awdinle Online
Wararka laga helayo gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in Maleeshiyaad hubeysan ay qof Shacab ah ku dileen Duleedka Deegaanka Dacdheer oo dhaca Xadka Gobalka Galgaduud uu la wadaago Itoobiya.
Goobjoogayaal ayaa waxaa ay sheegeen in Ninka la dilay lagu Magacaabi jiray Cabdi Hassan Cadar, isla markaana maleeshiyadkii ka dambeeyay dilkaasi ay goobta ka baxsadeen, sidoo kalena degaanka lagad areemayo xiisad ka dhalatay dilkaas.
Wararka ayaa waxaa ay sheegayaan in dilka qofka Shacabka ah uu salka ku haayo aanooyin qabiil oo bilihii la soo dhaafay ka taagan degaano ka tirsan gobolka Galgaduud ee dowlad Goboleedka Galmudug.
Degaanka uu dilka ka dhacay ee Dacdhee iyo degaano kale oo hoostaga Magaalada Cadaado ayaa waxaa horay uga dhacay dilal la xiriiray aanooyin qabiil, iyada oo aysan jirin cid ilaa iyo hadda waxka qabanaty.
Dilka Maanta ka dhacay Duleedka Deegaanka Dacdheer ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli xalay wasiirka Amniga Galmudug Axmed Macalin fiqi uu sheegay inay tallaabo ka qaadi doonaan maleeshiyadka hubeysan oo Colaada ka hrinaya degaano ka tirsan Galmudug.
Previous articleHindiya oo digniin kasoo saartay xaaladda Soomaaliya
Next articleRooble oo caqabado kala kulmay in uu baajiyo banaanbaxa musharixiinta